Anyị ebugharịrị ndị ụsụụ ndị agha ... May Nwere Ike Wantchọ Ya | Martech Zone
Anyị emeela ndị ụsụụ ndị agha… May nwere ike ịchọ nke ọma
Sunday, Jenụwarị 31, 2016 Thursday, May 19, 2016 Douglas Karr
Aga m eme ihe n'eziokwu na enwere m mmechuihu ugbu a. Mgbe ole ejikwa Bochum Bochum kụrụ n'ahịa ma ụfọdụ ndị enyi m malitere ụlọ ọrụ ha, enweghị m ike inwe obi ụtọ karị. Dị ka ụlọ ọrụ, ike gwụrụ m ịbanye na esemokwu mgbe esemokwu na ndị ọrụ weebụ ga-enyefe anyị nsogbu ọ bụla na WordPress. Site na Bochum ejiri Bochum, ndị ọrụ anyị kwadoro WordPress, kachasị ya ọsọ, ma nwee atụmatụ akọwapụtara maka ijikwa saịtị anyị niile na ndị ahịa anyị niile.
Anyị debara aha ngwa ngwa dị ka ndị mmekọ ma nwee ọtụtụ narị ụlọ ọrụ debanyere aha, na-enye anyị ụfọdụ ezigbo mgbakwunye mmekọ. Isi ọwụwa anyị dị ka ụlọ ọrụ agabigala - anyị mechara nwee nkwado 24/7 maka ndị ahịa anyị yana ụfọdụ nnukwu nnabata na mgbịrịgba niile na mkpu. Nke ahụ dị ruo otu ọnwa ma ọ bụ karịa gara aga. A nabatara anyị na ndị ọbịa na otu sava na data data dị n'okpuru egwu usoro nke mbibi DDoS na-agbawa obi. Saịtị anyị na saịtị ndị ahịa anyị niile na-agbago na nkeji ọ bụla ma ọ bụ karịa, ọ dị ka, enweghị njedebe na saịtị.
Anyi jidere mana amalitere iwe na enweghị nkwukọrịta. Ndị ahịa anyị niile na-akụda anyị, anyị enweghịkwa ike ịgwa ha ihe ọ bụla n'ihi na nnabata anyị anaghị agwa anyị ihe ọ bụla. Emechara m gwa otu n'ime ndị nwe ya n'ime otu ọkachamara ọkachamara WordPress na Facebook ma kwuo na ha nwere aka niile ma na-arụ ọrụ iji nweta ndị ahịa emetụtara na sava ndị ezubere iche. Whew… nke magburu onwe ya ma m ekele ya maka ọrụ ya ma lelee anya Mbugharị.
Nke ahụ bụ, ruo mgbe anyị kwagara.
Ozugbo anyị webatara saịtị anyị, ọ tụbọrọ kwụsị. Enwere m nsogbu ịbanye, na-ebudata, ma ọ bụ na-eme ihe ọ bụla na saịtị ahụ. Ndị ọbịa m mere mkpesa ma na-awagharị site na ndị ọzọ gosipụtara saịtị ahụ na ebe dị nso. Google Search Console gosipụtara nsogbu doro anya:
Ejiri m onyogho a ma rịọ maka nlele anya na ihe nkesa m, na-eme ka ha mara na akwagara m n'oge na-adịbeghị anya. Ma egwuregwu ịta ụta malitere.
Anaghị m eme nke a… ha gafere m site na teknụzụ gaa na teknụzụ nke na-aga n'ihu na nku ya na ịnwa ịchọta nsogbu na saịtị m. Ha anaghị anwa ịchọpụta ma ọ bụ akụrụngwa ha. Ya mere, emere m ihe ọ bụla geek ga-eme. M kwụsịrị ebipụta na ofu nsogbu ọ bụla ka ha kwuru ha they na saịtị arụmọrụ mgbe gbanwere. Ikekwe, ha agụọla isiokwu m na mbụ ihe na-emetụta ọsọ ọsọ saịtị gị.
Nke a bụ ihe ha kpọgara m:
A PHP njehie nwere ngwa mgbakwunye akọwapụtara mgbe ọ mere API kpọọ. M nwere nkwarụ ngwa mgbakwunye, enweghị mgbanwe na ọsọ saịtị.
Arịrịọ na-esote na-ajụ m ebe m hụrụ saịtị ahụ adịghị nwayọ. N'ihi ya, m tụrụ ha aka Ihe nchọgharị nke Google Webmaster ha kwuru na nke ahụ enyereghị aka. Mba duh… M na-amalite iwe obere iwe.
Ha kwuziri na enweghị m akwụkwọ SSL na m Nzipu Nwepụta ọdịnaya. Nke a bụ okwu ọhụrụ, amabeghị m na CDN nwere nkwarụ (na mbu Mbugharị). N'ihi ya, m wụnye ihe Akwụkwọ SSL ha wee mee ya. Enweghị mgbanwe na ọsọ saịtị.
Ha tụrụ aro ka m jikọta JS na arịrịọ CSS. Ọzọ, nke a bụ otu nhazi ahụ tupu Mbugharị mana ekwuru m nke ọma ma wụnye a JS na CSS njikarịcha ngwa mgbakwunye. Enweghị mgbanwe na ọsọ saịtị.
Ha kwuru na m kwesịrị mpikota onu ihe oyiyi. Mana, n’ezie, ha enyeghị nsogbu ọ bụla ịhụ na adịla m mbụ compress oyiyi.
Mgbe ahụ enwetara m ozi na ha nwalere saịtị m na sava abụọ na ọ bụ m kpatara. Kpọmkwem, "Site na ozi a, anyị na-enwe ike ịhụ na ya abụghị ihe nkesa ma ọ bụ ihe nkesa na-ebu ibu nke na-eme saịtị ahụ ogologo ibu oge." Ya mere, ugbu a, m bụ onye ụgha na ọ bụ nsogbu m… Echetara m ụbọchị ndị a tupu mụ arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ekwesịrị ịbụ ọkachamara na WordPress.
Agwara m ha ka ha gwa m ihe m ga-eme ọzọ. Ha kwadoro m were onye mmepe (Anaghị m egwu egwu), nke ahụ ga-arụ ọrụ na isiokwu, ngwa mgbakwunye, na njikarịcha nchekwa data. Yabụ, ndị ọkachamara WordPress n'ụlọ ọrụ a enweghị ike ịgwa m ihe na-ezighi ezi, mana ha chọrọ ka m were ego n'agbanyeghị na m na-akwụ 2 ụgwọ ugboro atọ ihe ụgwọ ụlọ ọrụ nnabata ọ bụla
Ebe ahụ na-akawanye njọ, na-emepụta ugbu a Njehie 500 mgbe m na-agba mbọ ime ihe dị mfe n'ime nchịkwa WordPress. M na-akọ 500 njehie. Ihe ọzọ m maara, saịtị m apụla, dochie ya site na isiokwu dị larịị na plugins niile nwere nkwarụ. Ugbu a, amalitere m iji ALL CAPS na akara ngosi na nzaghachi m. Ebe nrụọrụ m abụghị ihe ntụrụndụ, ọ bụ azụmahịa… ya mere iwetu ya abụghị nhọrọ.
N'ikpeazụ, ana m akpọ onye sitere na ụlọ ọrụ nnabata wee kpọọ anyị ogologo oge maka nsogbu a. Nke a bụ ebe m fụọ… ọ na-ekweta na ọtụtụ ndị ahịa na-enwe nsogbu arụmọrụ ebe ọ bụ na ịkwaga ha na sava DDoS wakporo sava. N'ezie? Agaghị m eche.
Back to nchọpụta nsogbu… A gwara m na m nwere ike na-agbalị ịkwaga a ngwa ngwa DNS. Uzo ozo dikwa n'ọchịchịrị ebe ọ bụ na agbaola m na ngwa ngwa jikwaa DNS na-eweta.
Full akaghị… anyị na-azụ ụta na-ata ụta maka plugins. Otu plugins ndị ahụ na-arụ ọrụ tupu njem ahụ. N’ebe a emeela m nke ọma. M wepụtaara ụfọdụ ndị arịrịọ Ndị ọkachamara WordPress ha na-atụ m aka Flywheel.
M jikọọ na Flywheel ndi debanyere aha m maka a akaụntụ nnwale efu, kwaga saịtị ahụ maka m, ọ na-agba ọsọ na ọsọ ọsọ. Na, ndakpọ olileanya ọzọ, ọ na-eme ya ọnụọgụ ego nke ihe m na-akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ochie anyị.
Gịnị Mere M Ji Kpebie igkwaga Ala Ọzọ?
Kwaga saịtị anyị niile agaghị adị ụtọ. Emeghị m mkpebi a n'ihi nsogbu arụmọrụ, emere m ya n'ihi nsogbu ntụkwasị obi. Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ m ikpeazụ furu efu n'ihi na ha enweghị ntụkwasị obi (ma ha enweghịkwa iguzosi ike n'ezi ihe) ikweta na ha nwere ụfọdụ isi arụmọrụ arụmọrụ. Apụrụ m ịnagide ha ịgwa m eziokwu na inye atụmanya na mgbe ha ga-emezi ihe, mana enweghị m ike ịnagide ha naanị ịtụ aka.
A bụ ihe Webmaster akụkọ ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị:
I nwere ike na-eche ihe nwere ike ime mgbe Flywheel na-akawanye ibu… ọ ga - eme ka ahụmịhe yiri ya? Otu ihe m chọpụtara na mbugharị a bụ na ụlọ ọrụ ochie anyị enweghị ikike mebere iji mezuo arụmọrụ nke otu akaụntụ karịa ibe ya. N'ihi ya, nsogbu ahụ nwere ike ọ gaghị abụ nwụnye m ma ọlị, ọ nwere ike ịbụ onye ọzọ na-etinye akụ na sava na-ewetara anyị niile.
Na saịtị ahụ n'enweghị nsogbu Flywheel, anyị na-wụnye anyị nche asambodo na-eme ka anụ ọhịa ahụ dịghachi ndụ. Ana m arịọ mgbaghara maka enweghị ọdịnaya nke izu gara aga. Nwere ike nzọ na anyị ga-eme maka oge furu efu!
Ngosipụta: Anyị bụzi mmekọ nke Flywheel! Na Flywheel kemgbe akwado site na WordPress!
Tags: ife efejikwaa WordPress BochumWordPressakwụkwọ ntinye akwụkwọweta
3dị XNUMX nke Usoro Ntanetị Email Kwesịrị Iche
Blitz: Ọrụ na Ule si n'igwe ojii
Feb 1, 2016 na 7:09 PM
Ọ dị m ka mụ na ụfọdụ ndị ọbịa na-enwe nsogbu yiri nke ahụ. Na-eche ma ọ bụrụ na ha na-ewepụta ha Bochum Bochum jisiri ike na otu sava ndị na-enweta ọgụ DDoS? Otu aka-na-ata ụta egwuregwu ruo mgbe emesịrị nweta teknụzụ nke kwuru na ha achọpụtala ụfọdụ nsogbu sava n'ime ha na-arụ ọrụ. Ekwenyela na enwere m nsogbu kemgbe ahụ.
Feb 1, 2016 na 8:03 PM
Echere m na ọchịchọ dị elu maka nyiwe ndị a jisiri ike. O di nwute na, dị ka gị na m maara… e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ si n'ebe na “na-eche na ha maara” vesos maara n'ezie ihe na-aga na ndị a nyiwe. Ekwenyere m na ha ga-ejide ma jiri usoro nlekota nke ga - enwe ike ịchọta nsogbu. N'ikwu eziokwu, ihe omume a pụtara na ha na-atụba ụta na mgbidi. Enweghị m obi ike ọ bụla.
Feb 1, 2016 na 8:35 PM
Achọrọ m mgbu gị. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ijegharị site na ntuziaka nsogbu nsogbu ederede na-abaghị uru mgbe ị matara na ọ gaghị enyere aka.
Ndi ndi ọbịa a ebe a na akwado IonThree? Ma anyị kwesịrị ịtụgharị ịkwaga? Echere m na anyị dị ọhụrụ.
Ọzọkwa, Atụrụ m anya na ị ga-akpọ ụlọ ọrụ ahụ aha ebe ọ bụ na ị nwere ndị ahịa a na-anabata na ha, dịkwa ka m, ha nwere ike ịnọ na-eche ma ha nwere nsogbu ha na-amaghị maka ya. Nke ahụ bụ belụsọ na ị na-eme atụmatụ na ozi nzuzo nke ndị ahịa metụtara ya.
Feb 1, 2016 na 9:10 PM
Achọpụtara m okwu ahụ site na iji Webmasters Google ma na-elele stats anyị, Tolga. Ekwetaghị m na ọ bụ ndị ahịa ha niile, echere m na anyị kwụgidere na ụfọdụ sava nwayọ nwayọ na ọtụtụ ibu na ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbelata arụmọrụ, ọ nwere ike ọ nweghị ihe kpatara ịhapụ. Flywheel dị oke ọnụ maka nhọrọ akaụntụ ọtụtụ anyị, ejighị n'aka mana ị nwere ike ịchekwa ego ole na ole.
Feb 2, 2016 n’elekere 10:16 nke abali
Nnukwu onye ofufe nke Flywheel, Doug. A na-eji ihe karịrị otu afọ.
Feb 2, 2016 na 5:10 PM
Enweghị m ike ikwenye etu saịtị ahụ siri belata, na ha enweghị ike inye gị azịza kwụ ọtọ. Obi dị m ụtọ ịnụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma na Flywheel. N'oge na-adịbeghị anya, anyị gbanwere Bochum maka saịtị Roundpeg, ma nwee ebe kwụsiri ike maka saịtị anyị.
Mar 23, 2017 na 1: 30 AM
M na ọgụ na mgba na-atụba ụlọ ọrụ n'okpuru ụgbọ ala na ndị a posts n'ihu ọha. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ezigbo ndị mmadụ na olile anya m bụ na m jidere ha n'ọnwa ọjọọ.
Mar 24, 2017 na 2: 52 PM
M na a na-eche ihe banyere nke a, na ị maara ihe? Ị nwetara ya. Biko wepu uche m. N'agbanyeghị nsogbu anyị na-enwe w / Flywheel, ọbụlagodi n'ụbọchị ha kacha njọ, ha ka na-akụ ndị agha dịka HostGator, GoDaddy, wdg.